Komity iombonana ho amin’ny Dina: “Miantso ny filoha hanatanteraka ny velirano sy ny IEM” | NewsMada
Komity iombonana ho amin’ny Dina: “Miantso ny filoha hanatanteraka ny velirano sy ny IEM”
Par Taratra sur 11/02/2019
“Mampahatsiahy izahay fa na tsy nanao sonia ny Dina mamaritra ireo fomba mendrika sy mahitsy, nandritra ny lanonana tamin’ny 3 oktobra 2018, aza ny kandidà lah. faha-13, nankasitraka tamin’ny alalan’ny iraka nalefany an’ireo fanekena voalazan’ny fitsipi-pitondran-tena sy fahitsiana, ankoatra ny fanekena faha-21.”
Io no anisan’ny fanambarana jery todika sy tsoa-kevitry ny fanaraha-maso ny fampiharana ny Dina mamaritra ireo fomba mendrika sy mahitsy ifampifehezan’ ireo kandidà amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika, nampitainy tamin’ny tranonkalam-pifandraisana ny faran’ny herinandro teo. Milaza ny teboka faha-21 fa tsy hamoaka na hanambara voka-pifidianana tsy mbola ofisialy mba hitandroana ny fitoniana.
Koa araka ny voalazan’ireo andinindinin’ny Dina, ao amin’ireo teboka faha-27 ka hatramin’ny faha-30, natao ho an’ny kandidà voafidy: manasa ny filoha Rajoelina Andry Nirina ny komity mba hamoaka ny fanambaram-pananany amin’ny fanombohana sy amin’ny fiafaran’ny fe-potoana hiasany eo anivon’ny Bianco.
Miantso azy koa ny komity hanatanteraka ireo fanekena sy fampanantenana natao nandritra ny fampielezan-kevitra: velirano sy IEM. Eo koa ny hanokafana tetibola manokana ary miandalana ho an’ireo rafitra miady amin’ny kolikoly, araka ny voalazan’ny Paikady nasionaly amin’ny ady amin’ny kolikoly (2015-2025). Toy iznay koa ny fanatanterahana Dinika nasionaly ho amin’ny fanorenana ifotony ny firenena sy ny Repoblika, antoky ny fitonian’ny fiainam-piarahamonina.